Maamullo si deg-deg ah uga soo jawaabay dalabka Rooble | KEYDMEDIA ONLINE
Maamullo si deg-deg ah uga soo jawaabay dalabka Rooble
Labada maamul ee HirShabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa soo bedelay xubnaha lagu murmay.
MUQDISHO, Soomaaliya - HirShabeella iyo Koonfur Galbeed waxay soo bedeleen xubno laga saarey gudiyadda doorashooyinka dalka, kadib markii la ogaadey inay NISA katitsan yihiin.
HirShabeelle waxay soo bedeshay afar xubnood, oo labo kamid ah gudiga xalinta khilaafaadka doorashadda ay ku jireen, halka mid hal xubin ay kasoo bedeshay gudiyadda heer Federaal iyo Heer maamul goboleed.
Koonfur Galbeed labo xubnood oo kaliya ayaa laga soo bedelay gudiga doorashadda Heer maamul goboleed iyo midka Heer Federaalka, waxaana liiska loo diray xafiiska Ra'iisul Wasaaraha oo ka socoto howsha doorashadda.
Labada maamul ayaa ka jawaabey baaqii Rooble shalay uu soo saarey ee ku aadanaa in lasoo dedejiyo xubnaha harsan ee lagu soo bedelayo kuwa cusub, isagoo faray Gudiga Heer wasiir ee turxaan-bixinta gudiyadda doorashadda inay hubiyaan shaqsoyaadka imaanaya.
Waxay Musharixiinta u gudbiyeen RW Rooble liis 67 xubnood ah oo ay dalbadeen in laga saaro gudiyadda, maadaama ay kamid yihiin shaqaalaha dowladda, taageeriyaasha Farmaajo iyo NISA, waxaana illaa hadda laga saarey 34 kamid ah, iyadoo kuwa kale ay ku jiraan.